लोक सेवाको प्रश्नपत्रमा किराँतको अर्थ नै आपत्तिजनक |
लोक सेवाको प्रश्नपत्रमा किराँतको अर्थ नै आपत्तिजनक
On: २०७६ श्रावण ७ गते, मंगलवार, ०८:५९ बजे प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगलाई एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा धारा २४२ मा स्वीकार गरेको छ ।
लोक सेवा आयोगले प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व परीक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण लगायत कामका लागि सम्बन्धित शाखाले सम्बन्धित विषयका आवश्यक सङ्ख्यामा दक्षहरूको नाम समावेश भएको सूचीलाई समयसमयमा अद्यावधिक गराइ दक्ष र विशेषज्ञहरूको सूची राख्दै आएको दाबी गरेको छ ।
तर लोक सेवा आयोगको २०७६ साउन ४ गते पाचौँ तहको नासुको परीक्षामा सोधिएको 3-D को प्रश्न नं २२ मा किराँत अर्थको प्रश्नको उत्तरले किराँती समुदायलाई लज्जास्पद बनाएको छ ।
लोक सेवा आयोगले यो प्रश्नपत्र बनाइराख्दा किराँतको अर्थ कहाँको सन्दर्भ सामग्री प्रयोग गरि प्राप्त गर्यो यो भने खोजनीय विषय हो । किराँतको अर्थ दिने श्रोत व्यक्ति को हुन्? प्रश्न उठेको छ ।
आयोगले हचुवाकै भरमा किराँतको अर्थको रुपमा (ए) पूर्वको मान्छे, (बी) पश्चिमको मान्छे (सी) जीउडाल परेको मान्छे र (डी) एकोहोरो मान्छे भनी उत्तरहरू राखेको छ ।
किराँत अर्थको प्रश्नपत्र बनाउने र विशेषज्ञ व्यक्ति साँच्चिकै विशेषज्ञ र दक्ष व्यक्ति नै हुन् त ? यो प्रश्न अहिले नेपालका किराँत समुदायले उठाएको छ ।
लोक सेवा आयोगको यो प्रश्नको उत्तरले राज्यको प्रतिबिम्बित उत्तर आएको छ, राज्यको बुझाई र दृष्टिकोण आएको छ ।
किनकि लोक सेवा आयोग भनेको राज्यको संवैधानिक निकायले बोलेको आवाज हो ।
इतिहासदेखि किराँत समुदायको विशेषज्ञ तथा विज्ञ व्यक्तिहरूले हरेक लेख रचना, वक्तव्य तथा कार्यक्रमहरूमा किराँतको अर्थ सभ्यता, भूगोल, संस्कृति, ऐतिहासिकता बोकेको इतिहास भनेर परिभाषित गर्दै आएका छन् । यही सभ्यता, संस्कृति, भूगोल र ऐतिहासिकताको आधारमा प्रदेश नं १ लाई किराँत प्रदेशको नामाकरण गर्ने दबाबमूलक आन्दोलन पनि भइरहेको छ ।
अहिले किराँतको अर्थको उत्तर लोक सेवा आयोगले सही उत्तरहरू पहिचान गर्न नसक्नु कसको कमजोरी हो? लोक सेवाको प्रश्नपत्र बनाउने विशेषज्ञ तथा विज्ञ भनेको टियुको टपरको अगाडि ९ अङ्क थपेर गोल्डमेडलिस्ट भएजस्तै त होइन?
यो प्रश्नपत्रले लोक सेवाको प्रश्नपत्र बनाउनेप्रति शङ्का उब्जिएको छ ।
२०७६ श्रावण ७ गते, मंगलवार, ०८:५९ बजे प्रकाशित